Mpanivana, mpanangona, mpivarotra volamena : resen-dahatra ny hidiran’izy ireo ao anatin’ny fanarahan-dalàna | NewsMada
Najoro, ny volana avrily 2015, ny Ivontoeram-pirenena miandraikitra ny volamena na Anor (Agence nationale de l’or) solon’ny Comptoir de l’or, mandrafitra ny lalàna hidiran’ireo sokajin’olona samihafa ao anatin’ny ara-dalàna amin’io sehatra iray io. Nitondra fanazavana momba izany ny talen’ny Anor, Raoilison Guy, sy ireo mpiara-miasa aminy, omaly teny Ampiandrianomby.
Nitondrana fanazavana ny amin’ny tokony hidiran’ireo rehetra sokajin’olona samihafa miasa amin’ny sehatra volamena ao anatin’ny sehatra ara-dalàna. Nasaina manokana ireo mpividy sy mpivarotra volamena eo Analakely. « Sehatra misy vola ny volamena, saingy tsy fantatra ahoana marina ny fihodin’ny vola avy amin’izany, ary ho an’iza marina ny tombontsoa ? », hoy ny tale jeneralin’ny Anor, Raoilison Guy. Dingana natomboka ny fidinana nijery ny zava-misy marina any amin’ireo faritra malaza be volamena : Amoron’i Mania, Betsiboka, Menabe, Vakinankaratra, Atsimo Andrefana, Vatovavy Fitovinany. Nampahafantarina tany amin’ny kaominina maro any amin’ireo faritra ireo ny didy mifehy ho an’ireo mpanivana, mpanangona ary ny toby fivarotana.
Notsindrin’ny tale jeneraly manokana ny andraikitry ny kaominina amin’ny fanomezan-dalana ho an’ireo mpanivana sy mpanangona ao amin’ny faritra misy azy. Malalaka tanteraka izy ireo, araka ny sokajin’asany avy, amin’ny fanarahan-dalàna. Fanarahan-dalàna amin’ny fandoavan-ketra mifanaraka amin’ny lalàna momba ny hetra sy ny lalàna momba ny harena an-kibon’ny tany (Code général des impôts sy ny Code minier). Nentanina manokana ho amin’izany fanarahan-dalàna izany ireo mpividy sy mpivarotra volamena eo Analakely, tokony ho ao anatin’ny “sokajy faharoa”, araka ny fanavazana nomena azy ireo.
Tsy mividy na mivarotra ny Anor
Nampahalalana ihany koa ny famolavolana ny fananganana ny Société d’affinage et de traitement de l’or (Sato), hisahana manokana ny fanondranana volamena any ivelany, vita lingot. Araka izany, tsy mividy na mivarotra ny Anor. Manara-maso ny fanarahan-dalàna ataon’ireo sokajin’asa samihafa amina sehatra fitrandrahana volamena. Mampahafantatra ihany koa ny vidiny tokony izy (prix indicatif) fa tsy mametra akory. Miaka-midina mitovy amin’ny sandam-bola vahiny (dolara na euro) ny vidin’ny volamena.
“Sarotra ny miala amin’ny mahazatra, tsy tratra ao anatin’ny fotoana fohy ny fampanarahan-dalàna. Anisan’ny ezaka efa natomboka, ohatra, ny fanambarana tahirim-bolamena”, hoy ihany ny tale jeneralin’ny Anor, Raoilison Guy. Mbola hanohy ny fitsidihany any amin’ny faritra Atsinanana sy Betsiboka ny Anor, hahafantarana ny zava-misy marina manomboka any amin’ireo mpanivana any am-potony.